Japana : Topimaso Kely Amin’ny Teknolojia Ekolojika Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2018 11:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 简体中文, 繁體中文, Español, বাংলা, русский, English
Tamin'ny tapaky ny volana May, niaraka tamin'ilay rafitra “éco-points”, nanangana drafitra fanentanana [amin'ny teny anglisy] ny governemanta japoney mba hampiroboroboana ny fangatahana fampiasàna kojakojan-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra mitsitsy angovo. Ho faritana mazava amin'ny volana ambony io ny antsipiriany, aorian'ny fanamarinan'ny Diète [parlemanta japoney] ny tetibola fanampiny amin'ity taon-ketra ity.
Ny tanjona dia toa mitovy [amin'ny teny anglisy] amin'ilay fikasàna farany mba hamerina indray ny sarin'i Japàna, foiben'ny protocole de Kyoto, ho toy ‘ny’ firenena mampiasa teknolojia izay manaja ihany koa ny tontolo iainana. Angamba koa hnamarihana ny mampiavaka azy amin'ny mpifaninana aminy akaiky, i Shina.
Raha ny marina, tsy trangan-javatra vaovao ny ‘fironana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana’. Nandritra ny taona maro, dia nanandrana nampiroborobo ireo teknolojia vaovao sy ireo fitaovana manaja ny tontolo iainana [amin'ny teny anglisy] ho an'ny fampiasa andavanandro ireo orinasa mampiasa renivola sosialy ho fiaingàna.
Ny lahatsoratr'i Japan Probe [amin'ny teny anglisy] no manazava ny votoatin'ilay lahatsary etsy ambony.
Asehon’ilay mpitoraka bilaogy earthfuroshiki [ amin'ny teny japoney] ny fomba vaovao entina hamokarana angovo. Loharanon'angovo hafa, izay nampiharina voalohany tamin'ny 2006 no natolotry ny PDG -n'ny orinasa Soundpower Corporation (音力発電), 27 taona amin'izao fotoana izao.
[‘Ndeha hiresaka kely ny ] herinaratra vokarina amin'ny hovitrovitra [amin'ny teny anglisy] :
Amin'izao fotoana izao, ity teknolojia ity no ampiasaina [amin'ny ampahany] mba hanazavàna ny tetezana Goshiki Zakura Big Bridge [japoney] any Tokyo. Mazava [japoney] manomboka amin'ny filentehan'ny masoandro ka hatramin'ny misasakalina ilay tetezana noho ny angovo vokatra avy amin'ny hovitrovitra ary voatahiry miendrika herinaratra nandritra ny tontolo andro. Raha ara-teoria, dia azo atao ny mamokatra angovo amin'ny toerana rehetra mihovitrovitra toy ny fitendrena kitendry na fifindran-toeran'ny zavatra iray. Manokatra ny fahafahana mamokatra angovo mifanaraka amin'ny filàna izany, fa tsy mamokatra betsaka mihoatra.
Hitanareo eto [japoney] ny lahatsary iray tao amin'ny TV-tokyo izay manazava ny fotokevitr'io haivao io.
Farany, asehon'ny mpanolotsaina Shimo3781 [japoney] antsika ny fironana misy amin'ny indostrian'ny fananganana trano amin'izao fotoana izao izay mikendry ny hampitombo ny isan'ny sehatra maitso amin'ny tanàndehibe no sady mitsitsy angovo.